Ahịa Apple: Ihe Nkuzi iri I nwere ike itinye na ahia gi | Martech Zone
Ndị enyi m hụrụ m n'anya na-enye m oge siri ike n'ihi ịbụ onye Apple fanboy. Enwere m ike iji obi eziokwu dọọ ya niile na ezigbo enyi, Bill Dawson, onye zụtara m ngwa Apple mbụ m - AppleTV… wee soro m rụọ ọrụ na ụlọ ọrụ ebe anyị bụ ndị njikwa ngwaahịa mbụ iji MacBook Pros. Abụwo m onye ofufe kemgbe ahụ na ugbu a, na mpụga nke Homepod na Ọdụ ụgbọ elu, enwere m ngwaọrụ ọ bụla. Site na ngwanrọ na ngwaike ọ bụla, ọ tụrụ m n'anya na gburugburu ebe obibi nke Apple na-enyefe ndị ahịa ha. Enwere m mmechuihu na ndị ọkachamara na ụlọ ọrụ m na-aga n'ihu na-agbapụ na Apple mgbe ha na-aga n'ihu na-agbanwe nwayọ ịgbanwe otu anyị si eji teknụzụ emekọrịta anyị.
Dị ka m kwuru na eri na otu nke naysayers, ụbọchị gị Fitbit, Google Home, Windows ngwaọrụ, ekwentị gam akporo, na Roku ga-arụ ọrụ n'enweghị nsogbu na ibe gị agaghị eme. Apple na - ebugharị ihe ọhụụ na - adịghị ike nke onye ọ bụla na - asọmpi… eziokwu ahụ bụ na ha niile nwere onwe ha. Nke ahụ kwuru, enwere ohere maka Apple maka ihe ọhụụ. Ọ ga-amasị m ịhụ ọtụtụ ihe ọhụrụ na ngwa ngwa ụlọ. N'uche nke m, Amazon n'ezie na-agba ha butts na nka dị maka ikwughachi.
Zuru kwuru banyere ihe ọhụrụ nke Apple, ka anyị gaa na ahịa ha. Otu ihe m kwanyere ùgwù maka azụmaahịa Apple bụ na ọ na-elekwasị anya na ịma mma na ịdị mma nke ngwaọrụ ha ma ọ bụ nwere ike ndị mmadụ na-abanye na ha. O doro anya na ilekwasị anya na ịma mma nyeere… ịgagharị na ụlọ ahịa eletrọnik n'oge a na ekwentị ọ bụla, mbadamba, ma ọ bụ laptọọpụ ị hụrụ bụ ihe oyiri nke ngwaọrụ Apple. Ndị mmadụ bụ ndị mpako nke ngwá ọrụ ha na-eji, na-adọpụ ihe ultralight, mkpa, aluminom, unibody laptọọpụ gị akpa na a retina ngosi mgbe obi dị mma.
Nke a bụ ezigbo ihe atụ ebe ha gosipụtara iPad Pro:
Ike nke azụmahịa ha na-abụkarị ihe na-eme m. Ma ọ bụ naanị ịgba egwu na egwu sitere na mkpọsa ngwá ahịa izizi iPod, ma ọ bụ azụmahịa ha bụ Behind the Mac nke gosipụtara ụfọdụ n'ime ndị nwere ọgụgụ isi kachasị na mbara ala, Apple na-emetụ mmetụta gị.
Otu weebụsaịtị ahụ chịkọtara nkuzi 10 sitere na atụmatụ azụmaahịa Apple nke metụtara akụkụ niile nke ụlọ ọrụ ahụ. Na infographic na-esonụ, 10 Ihe omumu ahia site na Appleha gụnyere:
Nọgidenụ na-Ọ Dị Mfe - N’ime ahịa apụl, enweghị ozi ọ bụla gbasara ebe na otu esi azụta ngwaahịa ha. Kama nke ahụ, mgbasa ozi na ozi ahịa ndị ọzọ dị nnọọ mfe - na-egosipụtakwa ngwaahịa ahụ ma hapụ ya ka ọ kwuo maka onwe ya.
Jiri Ntinye Ngwaahịa - Ozugbo onye na - emetụta ngwaahịa kesara ngwaahịa gị ma gosi ụmụazụ ya uru ọ bara, a na-akụ mkpụrụ ahụ ma na - eduga.
Leverage Nyocha - Apple emeela nke ọma inweta nyocha site na ndị ahịa ya.
Lekwasị anya na Nkọwa Uru Bara Uru Karịa Ahịa - Ihe ọ bụla ngwaọrụ Apple na-enye, ha na-ahụ na onye ahịa ahụ na ọ dị ka ọ bara uru ịkwụ ụgwọ dị elu. Otu ihe, n'echiche m, bụ ihe nkwụnye ha.
Guzo maka Ihe - Gosiputa ndi na ege gi nti na ika gi puru ichoputa ime ka ihe ha diri.
Mepụta Ahụmahụ, Ọ Bụghị Ngwaahịa - Onye ọ bụla nwere ike ịmepụta ngwaahịa, mana ọ bụghị ọtụtụ nwere ike ịmepụta ahụmịhe maka ndị ahịa na-echefu echefu ma na-arata ha ịbịaghachi ugboro ugboro.
Jiri Asụsụ Ha Gwa Ndị Na-ege Ntị Okwu - Site na izere okwu na nkọwa nke naanị na-eme ka mgbagwoju anya ma na-agwụ ike, Apple achọtala ụzọ ọ ga-esi rute ndị ahịa na ọkwa ọhụrụ nke asọmpi ahụ apụtabeghị.
Zụlite Aura na Mystery Gburugburu Ihe Are Na-eme - Ọtụtụ mgbe, ndị na-ere ahịa na-agwa ndị ahịa ha ihe niile gbasara ngwaahịa, mana Apple na-emepụta ọ moreụ karịa site na igbochi ozi ma mee ka onye ọ bụla chee echiche.
Perịọ Uche - Mgbasa ozi Apple na-egosi ndị nwere obi ụtọ na-enwe ọ withụ na iPads na iPhones ha kama ilekwasị anya na nha nchekwa ma ọ bụ ndụ batrị.
Jiri Anya - Ọ bụrụ na ejiri ya nke ọma, vidiyo na onyonyo yana ụda na-adọrọ adọrọ nwere mmetụta dị ukwuu karị na ahụmịhe ndị ahịa.
Tags: apụlapụl ikaapụl imeweapụl ahịaapụl nwerembọnnkwurịta okwuinfluenceripadIhe ngosi iPad Promarketingmarketing atụmatụVidio Ahịanweremfeanya